Dhalaanka keli socodka oo noqday bartilmaameedka kooxaha ka ganacsadda maandooriyaha ee dalka Iswiidhan | Somaliska
Kooxaha ka ganacsada maandooriyiha loo yaqaano Herowin-ka, ee meelo kala duwan ku iibiya magaaladda Stockholm, ayaa haatan bilaabay hanaan cusub oo ku dar dar gelinayaan falkaasi. Booliska magaaladda ayaa sheegay in dhalaanka keli socodka ah ay gacanta u galeen kooxahaasi kuna iibiyaan xaafadaha ajaanibtu ku badan tahay ee ku yaala waqooyi beri ee Stockholm.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay in tobankii dhalaan ah ay sagaal ka mid ihi maandooriyaha ku iibiyaan dhulka hoose taraanado maro. Erik Andlund oo ah madaxa booliska xaafadaha Rinkeby iyo Tenta in dhalaanka lugu soo qabto fal dambiyeedka la xirriira maandooriyaha ay yihiin dhalaanka keli socodka ah ee dalka dhawaanaha soo galay.
“Herowiin-ku waa maado la far sameeyey oo maanka doorisa qofkana ka dhigta inuu qabatimo kuna kalifta in xaalad adag ku noolaado oo uuka fogaado bulshadda inteeda kale” ayuu yiri Erik oo farta ku fiiqayey dhibaatada caafimaad ee maandooriyuhu leeyahay kasokow ay keento xaalad go’doonsanaan. Dhinaca kale nooc kale duwan oo ka mid ah qeybaha uu ka kooban yahay maandooriyuhu ayaa lugu iibin jiray ayaa boolisku haatan tilmaamayaan in herowiin-tu tahay nooc cusub oo ku soo kordhay xaafadaha ajaanibta ee Rinkeby, Tensta, Kista iyo Husby.
Ka ganacsiga maandooriyaha ee loo daabulay ama raray xaafadaha ajaanibta ayaa walaaceed leh, waxaana ay boolisku sheegeen in dowlada looga baahan yahay ineey la timaado xal siyaasadeed oo wax looga qaban karo. Ugu dambeyntiina dhalinyarro soomaali ah ayaa sanadki hore siyaalo kala duwan ugu dhintay magaalada Stockholm, ku waas oo qaarkood lala xirriirinayo fal dambiyeedyo ay ka mid yihiin xatooyo iyo iibinta maandooriyaha.
Shirkada baabuurta Linnebilar oo Soomaalida siinaysa deyn ribo la’aan ah